Fiara eo anoloana sy aoriana.
nataon'ny admin tamin'ny 05-11-21
Tsy misy karazany maro ny sunshield eo anoloana, amin'ny ankapobeny dia misy karazany roa ny aluminium foil sy ny lamba tsy voatenona. Ny aluminium foil dia matetika mizara ho karazana "birao maivana" mahazatra sy karazana lamina. Ny habeny dia amin'ny ankapobeny 60 * 130cm, izay mety amin'ny ankamaroan'ny fiara kely. Ny alum...
Paikady fiarovana amin'ny masoandro amin'ny fiara amin'ny fahavaratra
nataon'ny admin tamin'ny 23-06-21
Ny fahavaratra dia fitsapana goavana ho an'ny fiara, ny toetr'andro avo lenta dia mora miteraka fahasimbana amin'ny fiara sy ny tompony, ka ahoana no hanomezana ny fiara amin'ny masoandro? Visor masoandro amin'ny fiara Amin'ny fahavaratra, manomana aloky ny tara-masoandro maromaro mba hanavahana tsara ny hafanana ao anaty fiara. Misy ma...
Ahoana no hiarovana ny fiara amin'ny masoandro mahamay?
Amin'izao tontolo fitakiana fiara ankehitriny izao, mino aho fa efa niaina ny fahatsapana ny fidirana ao anaty fiara ny rehetra rehefa mafana ny andro. Toy ny manao palitao vita amin'ny landihazo vao miditra ao anaty sauna. Tsy dia be loatra. Ao anatin'ny tontolo toy izany dia tsy maintsy miaritra ihany ianao fa tsy ny tem...
Ny sarimihetsika fitaratra dia afaka "manatsara ny fiaranao" ary miaro ny hoditrao sy ny masonao amin'ny masoandro
Washington, 21 Jona 2021/PRNewswire/ - Ny teknolojia avo lenta ampiasaina amin'ny famokarana sy ny fametrahana matihanina amin'ny sarimihetsika fitaratra fiara dia mety "hanatsara kokoa ny fiaranao", toy ny fitaratra fiara mahazatra, na atolotra amin'ny SUV, kamiao na. fiara. Araka ny fanazavan’ny Int...
2F.138 Qiaonan Road, Tiantai.Zhejiang, Sina
Fanontaniana izao Fanontaniana izao